Maitiro Ekukwirisa kumusoro Kwako Kudonhedza Chitoro? Wepamusoro 9 Akajairika Makanganiso Ekudzivisa - Sarudza yako Kudonhedza Mentors kweKudonhedza Kosi
Maitiro Ekukwirisa kumusoro Kwako Kudonhedza Chitoro? Wepamusoro 9 Zvikanganiso Zvakajairika zvekudzivisa
Tumira zuva Muna January 2020 12 18 Day
Isu tinoziva kuti bhizimusi rinodonhedza riri nyore kwazvo kutanga, nekuti haufanire kufanotenga kana kutarisira kutumira, zvinoda kwete yakawandisa bhajeti kugadzira saiti yepamhepo uye kumhanyisa bhizinesi rako. Mazuva ese, kune vanhu vazhinji vanodzidza nezve kudonhedza uye kutanga bhizinesi ravo. Asi vazhinji vevatangi ava vakasiya mushure mekunge vasina kutengeswa mumavhiki mashoma ekutanga. Nei chitoro chako chisiri kuita chero kutengesa? Zviri zvekushambadzira, ndezve peji rako rezvigadzirwa, ndezvemitengo, zvakawanda zvinogona kuita kuti vangangove vatengi vako vasiye kubhadhara iyo bhiri. Zvino ngatione zvikanganiso zvaunogona kudzivisa izvo zvinogona kutungamira mukutengesa kwakashata kwebhizinesi rako rekudonha.
1.Chidiki traffic kune yako saiti
Pasina yakanangwa traffic, yako chitoro haisi kuzoburitsa chero mari. Iwe haugone kumirira vatengi kuti vauye kwauri, kunyanya kana iwe uchimhanyisa online chitoro, traffic zvinoreva zvese. Izvo zvaizobatsira kana iwe ukagadzira mishandirapamwe yekushambadzira yekukwevera traffic kune yako saiti, akawanda anodonhedza anomhanyisa Facebook kushambadzira kudhirowa traffic. Facebook kushambadzira ndeimwe mhando iri nyore nzira yekukwevera traffic kune vanotanga, asi kana iwe ukasawana yakawanda bhajeti, kune dzakawanda dzimwe nzira dzekutengesa senge kukurudzira kushambadzira, kushambadzira munharaunda kana zvemukati, uye zvimwe zve sarudzo. Iyo poindi ndeyekuti, iwe unofanirwa kudhirowa yakawanda traffic sezvaunogona kuchitoro chako, kazhinji kutaura, yakawanda traffic inoreva zvimwe kutengesa.
2. Yakashata mhando yezvigadzirwa zvemukati
Chigadzirwa chemukati chinowanzo kuve nemifananidzo yechigadzirwa, mavhidhiyo, uye tsananguro. Kazhinji, iwe unogadzira vhidhiyo kushambadzira kana chifananidzo chemufananidzo kukwezva vatengi kune yako saiti, ipapo vashanyi vanodzidza zvakawanda nezvechigadzirwa nemifananidzo uye tsananguro pane peji yechigadzirwa kuti vasarudze kuti vatenge chigadzirwa here kana kwete. Saka izvo zvigadzirwa zvemukati zvakakosha zvakanyanya kune chiyero chekushandurwa. Fungidzira pawakapedza matani ekuedza kukwezva vanhu kune yako saiti, asi mashoma kutengesa akagadzirwa, vanhu vanoenda nekuda kwehurombo hwemifananidzo yechigadzirwa uye tsananguro kana kunyangwe dhizaini yakaipa yeako peji rezvigadzirwa. Iwe haudi kuti izvo zviitike.
Mifananidzo uye tsananguro zvinofanirwa kugadzirwa kukwezva vatengi kuchinhu icho. Kana iwe uine shoddy mapikicha kana kuvimba chete pane zvehunyanzvi tsananguro, iwe ucharasikirwa yakawanda yekutengesa nekuti iwe unokundikana kuburitsa kufarira mune zvigadzirwa zvako. Ratidza zvigadzirwa zvako kubva pamakona mazhinji, nemifananidzo yemhando yepamusoro, uye gadzira tsananguro dzakasarudzika dzinoratidza vatengi kukosha kwezvigadzirwa uye kuti vatengi vangabatsirikana sei nazvo. Uye gadzira yakasarudzika vhidhiyo yekugadzira inzira inozivikanwa, ikozvino, yekuratidza chigadzirwa chako zvakanyatsonaka. Unogona kugadzira zvirimo wega, kana kuenda kuFiverr kunotsvaga nyanzvi yekutora mifananidzo ikuitire, kana kungowana chinongedzo pane rondedzero iri pazasi kutumira kubvunza kuCJ kuti uwane basa rakanakisa rekutora mifananidzo.
3. Taridza vateereri vasiri ivo
Dzimwe nguva, haugone kuwana kutengesa mushure mekushandisa mari yakawanda pazvishambadziro kana matani enguva uye kuyedza kushambadzira zvemukati. Kana zvirizvo, mira uone. Uri kunanga vanhu chaivo? Ita shuwa kuti iwe unoita kuti vateereri vako vatsvage nguva dzese paunogadzira mushambadziro wekushambadzira kuitira kuti kushambadzira kwako kunangise vanhu chaivo. Semuenzaniso, kana iwe uri kutengesa amai uye zvigadzirwa zvevacheche, hazvina kuchenjera kushandisa nguva nemari kusimudzira kushambadzira kune vechidiki vechikoro, vasiri vateereri chaivo.
4. Kwete mitengo zvakanaka
Zvigadzirwa zvemitengo zvinokosheswa zvakanyanya mubhizinesi rako rekudonha: kana mitengo yako yakanyanya kuderera, vatengi vanogona kufunga kuti zvigadzirwa zvako ndezvemhando yakashata. Mutengo wakanyanya kukwirira, uye ivo vanozotenga kumwe kunhu. Paunokoshesa mutero uye mari yekutumira, zvinotonyanya kuoma. Kutsvaga kwemusika uye kuyedza uye kukanganisa kunogona kukubatsira iwe kuti uwane iyo inotapira nzvimbo inotapira iwe yaunoda kuwana uye chengeta vatengi. Tarisa uone vhidhiyo yedu yapfuura 5 mawebhusaiti ekusora chigadzirwa chigadzirwa. Panzvimbo idzi, unokwanisa kuongorora mitengo yemakwikwi ako uye unopa mutengo unokwikwidza.
5. Yakavanzika mari yekutumira
Iko kune kunonakidza kwekutenga pamhepo kufarira: vatengi vari kuda kwazvo kutenga chinhu chakatengwa pamadhora makumi mana nekutumirwa kwemahara pane chinhu chimwe chete chakatengwa pamadhora makumi matatu nemadhora mashanu emadhora ekutumira. Saka kana vatengi vako vaona zvakavanzika zvekutumira mari kana uchidongorera, ivo vakaita sekusiya ngoro. Kutumira mitero ndechimwe chezvikonzero zvikuru zvekusiya ngoro yekutenga, vanhu havasi kuda kubhadhara kutumira. Asi inyaya iri nyore kugadzirisa, ingo wedzera mutengo wekutumira kumutengo wechigadzirwa kana kuseta kwemahara kutumira kwemaodha anodarika $ 40 kana $ 35.
6. Hapana ruzivo rwekuonana
Ruzivo rwekubata runogona kuita kunge diki diki, asi chakakosha seti yekuvaka kuvimba nevatengi vako. Vatengi havana pfungwa yekuchengetedzeka kana vasingakwanise kuva nekutaurirana panguva yakakodzera nemutengesi kana paine dambudziko, uye kushomeka kwekuchengeteka kunotungamira kumotokari dzakasiiwa. Ndosaka kushandira vatengi kuchikosha kue-com bhizinesi. Ita shuwa kuti vatengi vanogona kusvika kwauri zviri nyore, uye gara uchipindura kekutanga.
7. Maitiro akaoma ekutarisa
Iyo yakaoma, yakawanda-nhanho Checkout maitiro chiitiko chinoshungurudza kune vatengi. Kazhinji kutaura, vanopfuura makumi masere muzana evatengi vatengi vanga vaenda nhanho imwe kuenda kumubhadharo wekupedzisira. Saka kana iwe uchida kuwedzera chiyero chekutengesa, unofanirwa kugadzira pfupi pfupi yekutora maitiro. Saizvozvowo, usambofa wakada kunyoresa kuti ubudise mari. Rega vatengi vapfuure nemaitiro uye sarudza sarudzo yekunyoresa uye chengetedza yavo info pakupedzisira, kuitira kana vachida kudzoka zvakare. Unogona kuwana dzimwe nzira dzekubhadhara pano.
8. Kutadza kufamba zvakanaka
Mazuva ano, sezvo anenge munhu wese aine smartphone, tenga pamhepo ne smartphone zvine mutsindo, uye vanhu vazhinji vachatenga pamhepo nema smartphones. Kana chitoro chako chepamhepo chiine mabhatani madiki, zvidiki zvigadzirwa zvigadzirwa, kana dhizaini dhizaini, kufamba kunogona kuomarara zvisingaite.
Zvidiki-zvepombi zvinangwa zvinoita kuti zvive zvakaoma kurova chinongedzo chinongedzo kana bhatani pane shrunken nharembozha skrini, iyo inogona kusvibisa ruzivo rwekutenga uye kutyaira vatengi kumwe kunhu. Saka ita shuwa kuti dhizaini yako inoteerera, iine mifananidzo hombe uye mabhatani akaenzana. Kufanana neGoogle inokurudzira mapombi ekupomba uye mabhatani ayo angangoita 48 pixels akareba / akafara.
9. Hausi kuita nevatengi vako
Kubata kunoverengera zvakawanda mubhizimusi rekudonha. Kunyangwe iwe urikumhanya kushambadza kana kuita zvemukati kushambadzira, pasocial media kushambadzira, uye vamwe, kumwe kubatanidzwa kunoreva kuita kuri nani. Semuenzaniso, senge kesi dzandakagovana muvhidhiyo iyi, mutengesi wepositi ndiye akabata zvakanyanya kupindura zvakataurwa pazasi pepositi rimwe nerimwe. Mibvunzo yacho yaive yakaita, yakawanda sei chigadzirwa? Ndingaiwanepi? Chii chinotumirwa kune imwe nzvimbo? Uye zvakafanana. Nokupindura mibvunzo, mutengesi akavaka kuvimba nevateereri, uye akatumira vateereri kune peji yechigadzirwa nekusiya chinongedzo kumashoko ese. Kunze kwezvo, Batanidza vatengi vako uye vateveri pasocial media kana blog inzira yekuchengetedza bhajeti yekuchengetedza yako brand kumberi nepakati uye nekuvachengeta vachidzoka.
Tags cj kudonhedza, cjdropshipping, dropshipping, kudonhedza kosi, kudonhedza zvikanganiso, kutanga sei kudonhedza bhizinesi, kutanga sei kudonhedza, makemoneyonline, mazano ekushambadzira, shopify
← Pfupiso Yegore Pfumbamwe yeEvhenekerwa Pamusoro-kutengesa Kudonhedza Mukunda Zvigadzirwa paCJdropshipping → Mwedzi Q & A paCJdropshipping | Nei Kutakura Kuchidhura Zvikuru uye Kwakamuka Zvakanyanya Munguva pfupi yapfuura?